Umthombo weNtshutshiso nokuKhululwa
Indawo apho ama- chromosomes amabini (nganye eyaziwayo njenge- chromatid ngaphambi kokuba i-cell isahlukane) ihlanganiswe ngaphambi kokuba ihlukaniswe kabini ibizwa ngokuba yi- centromere . I-kinetochore yipaki yeprotheni efumaneka kwi-centromere nganye yechromatidi nganye. Yilapho i-chromatids ixhunyiwe ngokuqinile. Xa lixesha, kwisigaba esifanelekileyo sesahlulo seseli, injongo ye-kinetochore iphambili ihambisa i-chromosomes ngexesha le- mitosis kunye ne- meiosis .
Unokucinga nge-kinetochore njengengqangi okanye kwindawo ephambili kwimidlalo yokulwa. Icala ngalinye lokukhwela li-chromatid lilungele ukushiya kwaye libe yingxenye yeseli elitsha.
Igama elithi "kinetochore" likuxelela oko lenzayo. Isiqalo esithi "kineto-" sithetha "ukunyakaza," kunye nesisithintelo "-tore" sithetha "ukuhamba okanye ukusasazeka." Nganye i-chromosome ine-two tattochores. I-microtubules ezibopha i-chromosome zibizwa ngokuba yi-kinetochore microtubules. Iifayili ze-Kinetochore zanda kwiphondo ye-kinetochore kwaye zidibanisa i-chromosomes kwiimbombo ze-polar microtubule . Ezi fiber zisebenza kunye ukwahlukana kwama-chromosomes ngexesha lokuhlukana kweeseli.
Indawo kunye nokuThengwa kunye nokuBala
Ifom ye-Kinetochores kwifom ephakathi, okanye i-centromere, ye-chromosome ephindaphindiwe. I-kinetochore iqukethe isithili sangaphakathi kunye nommandla ongaphandle. Ummandla ongaphakathi unyanzelekile kwi-DNA ye-chromosomal. Ummandla ongaphandle udibanisa nefowuni .
I-Kinetochores nayo idlala indima ebalulekileyo kwikhonkco yesikhombiso se-cell spindle.
Ngexesha lomjikelo weseli , ukuhlolwa kuyenziwa kumanqanaba athile omjikelezo ukuze kuqinisekiswe ukuba ukwahlukana kweeseli ezifanelekileyo kwenzeka.
Enye yezinto zokuhlola iquka ukuqinisekiswa ukuba iifayili zokhuni zixhomekeke ngokufanelekileyo kwi-chromosomes kwii-kinetochores zazo. Iimpawu ezimbini ze-chromosome nganye kufuneka zifakwe kwii-microtubules ezivela kwizibonda eziphambeneyo.
Ukuba akunjalo, isisele esahlukanisayo sinokuphela ngeenombolo ze-chromosomes. Xa zifunyenwe iimpazamo, inkqubo yomjikelo weselingi iyanqanyulwa de kube kwenziwe izilungiso. Ukuba ezi mpazamo okanye utshintsho alikwazi ukulungiswa, iseli iya kutshabalalisa kwinkqubo ebizwa ngokuba yi- apoptosis .
Kwisahlulo seseli, kukho izigaba eziliqela ezibandakanya izakhiwo zeeselisebenza ngokubambisana ukuqinisekisa ukuhlukaniswa kakuhle. Kwi- metaphase ye-mitosis, i-kinetochores kunye ne-fibers e-spindle kunceda ukubeka i- chromosomes kwindawo ephakathi kweseli ebizwa ngokuba yi-metaphase.
Ngexesha le- anaphase , ii-polar fibers zibangela ukuba izibonda zeseli zihlukane kwaye i-kinetochore fibers iyancishiswe ubude, njengento yokudlala yezingane, umgibe waseChina. I-Kinetochores ibophe ngokugqithiseleyo i-polar fibers njengoko ixutywa kwiipalo zeseli. Emva koko, iiprotheni ezinokwakheka i-kinetochore ezibamba i-chromatids dade zidibene kunye zivumela ukuba zihlukane. Ngomfanekiso wesinqe somnwe waseTshayina, kuya kuba ngathi umntu uthathe isiqwenga aze aqambe umgibe kwindawo ekhupha amahlangothi omabini. Ngenxa yoko, kwi-biology ye-cellular, udade we-chromatids udityaniswe kwiipaliti eziphambene nezicwangciso. Ekupheleni kwe-mitosis, iiseli ezimbini zeentombi zenziwe ngokuzaliswa ngokupheleleyo kwama-chromosomes.
Kwi-meiosis, iseli ihamba kwinkqubo yokwahlula kabini. Ngenye inxalenye yenkqubo, i- meiosis I , i-kinetochores idibene ngokukhethekileyo kwiifayili ze-polar ezisuka kwipolisi enye kuphela. Oku kubangela ukuhlukana kwama-chromosomes homologous (i-chromosome paires), kodwa kungekhona i- chromatids yoodade ngexesha lo-meiosis I.
Kwingxenye elandelayo yenkqubo, i- meiosis II , i-kinetochores ifakwe kwiibumba ezihamba ngeefowuni ezivela kwiibonda zombini. Ekupheleni kwe-meiosis II, i-chromatids yoodade ihlukanisiwe kwaye i-chromosomes ihanjiswa phakathi kweentombi zeentombi ezine .
Amafutha, i-Steroids, kunye nezinye izibonelo ze-Lipids
Ulwahlulo phakathi kweZityalo kunye neeSeli zezilwanyana
I-Quill Respiration Quiz
Funda ngeNucleic Acids
'I-Front Front' kunye ne 'Back Nine' kwiiKlasi zeGalufa
Ukuzama ukubulawa kwe-FDR
I-Coastal Carolina University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iimidlalo kunye ne-Improv Imidlalo yeKlasi kunye neNgaphandle
Inkcazo yeeNkqubo zoKhuselo kwiC and C ++
Ibali leFama elibanjelwe "kwiiNtshontsho" nguSusan Glaspell